Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 28
Moa ve isika sa tsy miray amin'ny atma-buddhi?
Tsy izany isika. Amin'ny ankapobeny ny olana ary tsy fantatra, ary fantatsika fa fantatsika ny antony rehetra ianteherana. Ny antony dia atma sy buddhi izay misy antsika "isika" na tsia "firaisana." Ny fanontaniana dia miharihary fa manontany avy amin'ny fomba fijery teôsôpika. Atma dia voalaza fa ny saina maneran-tany mampiely ny zavatra rehetra. Nolazaina fa fanahy ara-panahy, fiara aterak'i Atma, i Buddhhi, ary amin'ny alàlan'ny atma izay manao izany. Ny "izahay" dia voalaza fa olona mahatsiaro tena. Ny "Union" dia toe-javatra iray ifaneraserana na ifangaroana. Atma ilay toe-tsaina mahatalanjona ary manetsika ny fiarany dia miray hatrany; satria mihetsika am-pilaminana mandritra ny fotoana rehetra izy ary buddhi dia mahatsapa hoe Atma ary miray izy roa. Noho izany dia azo lazaina ho toy ny iray tafaray izy ireo izay mahatsiaro tena amin'ny ankapobeny. Raha ny mampiavaka antsika dia ny firaisana amin'ny atma-buddhi, tsy maintsy mahatsiaro tena aho ary tsy maintsy fantatro hoe iza aho; tsy maintsy mahalala ny maha izy azy sy ny maha-izy azy ary tsy maintsy mahatsiaro tena ihany koa ny buddhi sy atma, ary tsy maintsy mahatsiaro fa amin'ny maha-olona iray dia ampiraisina, tafaray miaraka, ilay buddhi sy atma manerantany. Rehefa olona iray aho dia mahatsapa ny mombamomba azy ary fantatro fa miaraka amin'ny atma sy buddhi tsy fantatra amin'ny ankapobeny, dia afaka milaza ny tsirairay fa "firaisana amin'ny atma sy buddhi." Tsy hisy ny fanombatombanan'izany olona izany momba ny hoe atma sy buddhi ary isika, ary inona ny firaisana, satria hahalala io olona io ary ny fahalalana dia hamarana ny fanombatombanana. Amin'ny toe-piainan'ny olombelona ankehitriny, “tsy” fantatsika hoe iza isika. Raha tsy fantatsika hoe iza isika, dia tsy fantatsika hoe iza na iza buddhi sy atma; ary raha tsy fantatsika hoe iza isika ary tsy mahatsiaro tena amin'ny ankapobeny, dia tsy olona mahatsiaro tena ho tafaray isika miaraka amin'ny fitsipiky ny tontolo atma sy buddhi. Firaisana ny firaisana ary eo amin'io fiaramanidina io ny fifandraisana mifandray amin'io zavatra mitambatra io. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy afaka milaza marina fa miray aminy na miray amin'ny zavatra rehetra tsy mbola fantany akory, na dia mety hitranga izany zavatra hafa izany. Atma sy buddhi dia miaraka amin'ny olona amin'ny fotoana rehetra fa ny olombelona na dia ny fahatsiarovan-tena aza dia tsy mba mahalala na tsy mahalala ny atma sy buddhi ho fitsipika manerantany sy ara-panahy. Satria tsy mahatsiaro tena amin'ny maha-izy azy izy ary satria tsy fantany akory ny mombamomba azy manokana, noho izany, izy, olona, ​​toy ny fisainana fa tsy miray amin'ny atma-buddhi.
Moa ve tsy marina fa ny zava-drehetra azontsika dia efa ao amintsika ary ny zavatra rehetra tokony hataontsika dia ny mahatsapa izany?
Amin'ny ankapobeny, tena marina ary, ny tokony hataontsika amin'ny voalohany dia ny fahatsiarovantsika izay rehetra ao anatintsika. Ampy ho an'ny ankehitriny izany. Dia, angamba, tsy maintsy mahatsapa ny zava-drehetra any ivelantsika isika ary hahita ny fahasamihafana eo sy misy antsika rehetra.
Ny fanontaniana toy ny fanambarana dia mampitony sy malefaka toy ny rivotra malefaka amin'ny fahavaratra — ary tsy voafetra. Raha misy mamaly ny tenany amin'ny fanontaniana toy izany sy ny valiny hoe "eny" na valiny tsy voafetra ao amin'ny fanontaniana, dia hisy ny tombony kely azo avy amin'ny agriculturistana izay mameno ny tenany amin'ny eritreritra fa efa nametraka toerana tao amin'ny mangidy ny voa rehetra amin'ny maniry rehetra. Ny olona mahalala na mino fa manana ny fahazoany izay rehetra azo atao na lasa mahalala, ary izay tsy tonga amin'ny zavatra fantany, dia ratsy faran'izay ratsy kokoa noho ny tsy mirehitra miaraka amin'ny soso-kevitra maharesy nefa izay manandrana manatsara kokoa ny toe-batany ankehitriny. Any amin'ireo firenena any Atsinanana dia mahazatra ny maheno ireo mpivavaka amin'ny famerenana amin'ny fiteny tsirairay avy: "Izaho no Andriamanitra"! "Izaho no Andriamanitra"! "Izaho no Andriamanitra"! miaraka amin'ny fahatokiana mora sy azo antoka. Nefa ve izy ireo? Matetika ireny andriamanitra ireny dia mpangataka eny an-dalambe ary tsy dia mahafantatra firy fotsiny izy ireo hanaovana izany; na mety misy mianatra sy afaka miditra amin'ny tohan-dàlana lava entina hanohanana ny fitakiany. Saingy vitsy amin'ireo izay manao izany fitakiana izany no manome porofo amin'ny fiainany sy ny asany izay azony sy mahazo azy io. Nampidirinay tamin'ireto karazan'entana isan-karazany ireto izany fanamafisana izany ary mbola mandray entana vaovao any Etazonia. Fa raha andriamanitra izy, iza no te ho andriamanitra?
Tsara ny hino ny olona fa mety ho azy avokoa ny zavatra rehetra; fa ny fihatsarambelatsihy ao aminy ny manandrana ny tenany hino fa efa nahatratra ny fanjakana izay mety ho azo atao. Ilay mpahay simika ao amin'ny laboratooriny, mpanao hosodoko amin'ny safodiny, mpandrafitra eo amin'ny marbra, na ilay mpamboly eny an-tanimboliny, dia bebe kokoa an-driamanitra noho ireo mandeha sy mandehandeha ary manaporofo fa andriamanitra izy ireo, satria ny ao anatiny dia ao anatiny. azy ireo. Voalaza hoe: “Izaho no mikrokosôma makrôzôma.” Marina ary tsara. Nefa tsara kokoa ny hetsika noho ny milaza izany.
Ny fahalalana na ny mino zavatra iray no dingana voalohany amin'ny fanatanterahana izany. Fa ny mino ny zavatra iray dia tsy misy na tsy mino. Rehefa mino isika fa ny zava-drehetra azontsika atao dia tonga ao an-tsaintsika fotsiny dia lasa mahatsapa ny zavatra inoantsika isika. Tsy fahalalana ny zavatra ato amintsika izany. Ho tonga saina amin'ny zavatra inoantsika isika amin'ny fiezahana hahatakatra azy ireo sy amin'ny fiasana ho azy ireo. Tarihin'ny antony manosika antsika ary araka ny asantsika dia ho tonga saina isika amin'ireo zavatra ao anatintsika ary hahatongavana amin'ny fahatongavantsika. Amin'ny alàlan'ny asany dia miteraka ny asany izay asehony ny alàlan'ny tolo-kevitra ny mpahay simia. Ny sary hosodoko dia hita maso ilay idealy ao an-tsainy. Ny mpanao mpanao sokitra dia mahatonga ny sary ao an-tsainy hiala avy amin'ny marbra. Ny mpamboly dia mampitombo ireo zavatra ireo izay mety ho voany ihany. Ny olombelona rehetra manana ny zavatra rehetra ao anatiny dia fisainana avy amin'Andriamanitra. Ity eritreritra ity no mety ho masaky ny maha-Andriamanitra. Io eritreritra masina io dia manararaotra, manesoeso ary miady hevitra rehefa zatra mipetaka fotsiny ilay izy. Rehefa tsofina mora foana ny vavany, dia tsy hamaka ny fakany, toy ny voa nafafy amin'ny tany mangatsiaka. Izay mahalala ny hasarobidin'ny sy maniry ny hamboly voa dia tsy hanala azy fa hametraka azy amin'ny tany mety sy hikolokolo ary hikarakara izay maniry amin'ny voa. Ny iray izay milaza tsy tapaka fa Andriamanitra, izy no mikrokosôma makrokosôma, fa i Mithra, Brahm, na Andriamanitra masina hafa no mamoaka sy mamono ny voa izay ananany ary tsy mety ho iray amin'izy ireo ny mason'Andriamanitra dia hamaka ary hitombo. Izy izay mahatsapa fa navalin'i Noa tokoa ary mahatsapa ny maha-Andriamanitra ao anatiny ary mitazona masina ary mamelona ilay eritreritra. Amin'ny fambolena sy fanatsarana ny eritreritra ary amin'ny fihetsika mifanaraka amin'ny zavatra inoany, dia manome ny fepetra ao anatiny ary amin'ny alalany no itomboan'ny faharanitan-tsaina sy ny maha-Andriamanitra azy. Avy eo dia lasa tsapany tsikelikely fa ny zava-drehetra ao anatiny ary tonga tsapany tsikelikely ny zavatra rehetra.